InstaZoom -Kurisa Instagram chimiro chemufananidzo mune yakazara HD
InstaZOOM -Kurisa Instagram profile picture
Wona uye dhawunirodha Instagram profiles mapikicha mune yepamusoro mhando HD.
Dhawunirodha Insta DP uye nezvimwe
Shandisa yedu Instagram downloader maturusi kuchengetedza nguva dzakanakisa pane chako kifaa zvachose
Chii chiri Instazoom?
Instagram inzvimbo yesocial media ine vanopfuura mamirioni mazana matanhatu vashandisi vanoshanda. Instazoom ndiyo yekutanga pasirese yekuona Instagram iyo inokutendera kuti utarise saizi yakazara mapikicha, kurodha uye nezvimwe. Instazoom ibasa repamhepo rinoratidza foto yega yega mushandisi account mune yakakura fomati pasina kusiya browser yako hwindo.
Kuganhurirwa paKuona Instadp
Instadp yave iripo kwenguva yakareba uye haisi kuzoenda zvakare mune ramangwana. Asi ko kana uchida kuona profile picture yemunhu izere? Instagram inodzikamisa iyi sarudzo, zvisinei Instazoom kwete! Instagram zoom inopa imwe nzira yekuona yakaganhurirwa pa Instagram, ichikubvumidza kuti uswededze muprofile Instagram zoom yevashandisi vako vaunofarira pasina zvirambidzo kana zvipimo. Instazoom inokupa iwe kuwana kune ese maficha e Instadp-Akaundi yemunhu.
kushandiswa kwe Instazoom muupenyu?
Kuziva vanhu mumifananidzo: Mapikicha epa Instagram akadzikama-resolution, izvo zvinogona kuita kuti zviome kuziva vanhu mumifananidzo. pamwe Instazoom iwe unogona kuona Instagram profil pikicha yakasimudzwa uye mune yepamusoro resolution, zvichiita kuti zvive nyore kuziva shamwari nemhuri dzavo.
Unogona kuona kana mufananidzo wepikicha uri wechokwadi nekuuenzanisa nemufananidzo wemumwe munhu.
Kopa pikicha yako nyowani uye uiname pane chako kifaa: unogona kudhawunirodha mufananidzo wacho uye wouchengeta mugalari yako kuti uuone gare gare, kana kuishandisa senge Wallpaper pafoni yako kana komputa.
Wakambogamuchira zvikumbiro zvisinganzwisisike pa Instagram kubva kune vausingazive zvachose? Usati waita pfungwa dzako, funga kuti zvinoitwa nevavariro yakanaka here kana kuti yakaipa.
Unlimited usability - Instazoom inogona kushandiswa kune zvakasiyana-siyana zvezvinhu.
Inoshanda sei Instazoom?
Instazoom inovimba nezita rako reprofile kana yeruzhinji url kana mumwe munhu pa Instagram kune mafoto. Instazoom Wedzera mifananidzo ye Instagram kuti ibudise mifananidzo yemhando yepamusoro.
NeInsta Zoom, unogona kukurumidza kuswededza muInsta Profile uye kurodha mapikicha evamwe vashandisi ve Instagram. Insta Zoom inokubatsira kugadzirisa yako Insta mbiri mufananidzo muHD mhando.
Maitiro ekukudza kana kudhawunirodha Instagram profiles mufananidzo ne Instazoom?
Nhanho 1: Shanyira peji redu rekutanga pa: www.instazoom.mobi
Nhanho 2: Pinda iyo Instagram url kana zita rekushandisa mubhokisi rekutsvaga pawebhusaiti wobva wabaya bhatani "ZOOM".
Nhanho 3: Kana mhedzisiro yabuda, unogona kudzvanya bhatani rekuona zoo kuti uone yakamisikidzwa Instagram mbiri pikicha yakakura mumhando yepamusoro.
Nhanho 4: Dzvanya bhatani reKudhawunirodha kudhawunirodha pikicha yako yemhando yepamusoro.
Ndizvo Instazoom zviri pamutemo?
Instazoom zviri pamutemo zvachose sezvo Instagram profiles inogovaniswa pachena. Instazoom- Saka vashandisi vari pamutemo zvachose.
Ndizvo Instazoom software?
Kwete! Instazoom iwebhusaiti inobvumidza iwe kuti utarise uye kurodha emhando yepamusoro Instagram profile mifananidzo.
Ini ndinodhawunirodha sei Instagram profile picture pakombuta?
Instazoom inoshanda zvakakwana pane chero mudziyo. Unogona www.Instazoom.Mobi shanya kuti utore yakanakisa Instagram mbiri yepikicha yePC yako.
Chii chinonzi Instagram profile picture kuwedzera - insta zoom?
Aya ndiwo mashandiro azvinoita Instazoom chaizvoizvo. Kazhinji, Instagram haikubvumidze kuti uratidze yakanakisa mhando yemapikicha. Instazoom yakagadzirirwa kukudza uye kugadzirisa yakanakisa mhando Instagram profiles mapikicha ekuona uye kurodha.
Ndinogona here kuona maakaundi ndisingazivikanwe semhedzisiro?
Kwete! Isu tinongobvumira vashandisi kushandisa Instazoom neruzhinji Instagram account.
Ndizvo Instazoom mahara?
Instazoom yakasununguka zvachose. Isu hatibhadharise chero mari yekuwedzera. Newewo unogona Instazoom kushandisa nerunyararo rwepfungwa rwakakwana.
Imwe nzira kune iZoomYou?
yakawanda iZoomYou pamusika haisisiri kushanda kana kusagadzikana, yakaderera mhando kudhanilodha mufananidzo. InstaZoom saka ndiyo yakanakisa imwe nzira yeZoomYou yekuona ruzivo uye kurodha emhando yepamusoro Instagram profiles mapikicha.
Iyo Izuum DB webhusaiti haisisiri kushanda. Instazoom saka ndicho chishandiso chakanakisa chekutsiva Izuum kukudza Instagram mbiri yemufananidzo nemhando yepamusoro.
ngowani Instazoom kuwedzera?
Hongu unogona kuzviwana Instazoom-Kuwedzera muchitoro chekuwedzera che Chrome- uye Firefox- Browsers.
Chinoshanda sei Instazoom-Kuwedzera?
Unogona kuona vhidhiyo tutori pazasi mashandisiro eiyo Instazoom-Ona kuwedzera: